विनाशकारी स्वास्थ्य बीमा के हो र म योग्य छु? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल कल्याण समाचार कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार खेलहरु समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कम्पनी >> विनाशकारी स्वास्थ्य बीमा के हो?
तपाईंको स्वास्थ्य बीमा, समयको अन्तरालमा, एक खराब चीज हो। यो धेरै कारणहरूको लागि परिवर्तन हुन सक्छ - कि त तपाइँले नयाँ काम सुरू गर्नुभयो, वा सारियो राज्यहरू, वा तपाईंको पुरानो योजना रद्द गरियो, उदाहरणका लागि। तर नकारात्मक पक्ष के हो भने कहिलेकाँही, त्यो परिवर्तनको मतलब तपाईं अब परम्परागत बीमा गर्न सक्नुहुन्न। भाग्यवस, हामी केहि लागि अर्को विकल्प छ: विनाशकारी स्वास्थ्य बीमा।
विनाशकारी स्वास्थ्य बीमा एक होस्वास्थ्य को वैकल्पिक रूपबीमा जसले सीमित आपतकालीन र रोकथाम देखभाल कभरेज प्रदान गर्दछ। तपाईं सामान्यतया धेरै उच्च कटौतीको बदलामा कम प्रीमियम भुक्तानी गर्नुहुन्छ। योजना सामान्यतया माथिको आधारभूत आवश्यकता मात्र कभर गर्दछ, त्यसैले तपाईं उस्तै सुविधाहरू पाउँनुहुन्न जुन तपाईं परम्परागत, अधिक व्यापक बीमा योजनाबाट पाउनुहुनेछ। आपतकालिन योजनाहरू आपतकालिन अवस्थामा एक सुरक्षा जाल हो।
ativan र xanax बीच के फरक छ?
विनाशकारी कभरेज खोज्ने प्रायः व्यक्तिहरू त्यसो गरिरहेछन् किनकि उनीहरू कि त ठूलो मेडिकल योजनाबाट नियमित कभरेज वहन गर्न सक्दैनन्, प्रमुख मेडिकल प्लानबाट कभरेज चाहँदैनन्, वा मेडिकेड जस्ता सरकारी सहयोगका लागि योग्य हुँदैनन् वा अफोर्डेबलबाट सब्सिडी लिन योग्य छैनन्। केयर ऐन मार्केटप्लेस।
आपत्तिजनक हेरचाह योजनाहरूको साथ, तपाईले प्रत्येक मेडिकल खर्चको लागि भुक्तान गर्नुपर्नेछ जबसम्म तपाईं आफ्नो कटौतीयोग्य नपुग्नु हुन्छ केही अपवादको साथ - कम्तिमा पनि तीन प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक भ्रमण पूर्ण मा कभर छन् १० आवश्यक स्वास्थ्य लाभहरू किफायती हेरचाह कानून द्वारा राखिएको। ती खोपहरू, एक वार्षिक चेक अप, केही क्यान्सर स्क्रीनिंग, म्यामोग्राम, एम्बुलेन्स सेवाहरू, गर्भावस्था, शल्य चिकित्सा, प्रयोगशालाको काम, र पुनर्वास सेवाहरू सामेल छन्। यसले केहि नुस्खा समेट्दछ, तर तपाईंले आफ्नो योजना सूत्र जाँच गर्नुपर्नेछ कि यदि तपाईंको हो भने निर्धारण गर्न।
त्यसोभए के कभर गरिएको छैन? मूल रूपमा सबै कुरा, जब सम्म तपाईं आफ्नो कटौतीयोग्य नपुग्नुहोस्। यसको मतलब यदि यदि तपाईको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हेर्नु पर्छ जस्तै हल्का संक्रमण वा बिग्रिएको औंला जस्तो, र तपाईंले पहिले नै तीनवटा अपोइन्टमेन्ट प्रयोग गरिसक्नुभयो भने, तपाईंले सम्भवतः जेबबाट सबै थोकको लागि भुक्तान गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं आपतकालीन कोठामा जानु छ भने, तपाईं आफ्नो कटौतीयोग्य पूरा नगरे सम्म पूर्ण लागतको लागि भुक्तान गर्नु हुनेछ। जबसम्म यो ती मध्ये तीन मध्ये एक हो वा आवश्यक हेरचाहको कभर गरिएको छैन, तपाईं हुकमा हुनुहुन्छ। तपाईं कटौती योग्य पूरा गरेपछि, कभरेज किक मा र सबै कुरा पूर्ण मा कभर छ।
आपत्तिजनक कभरेज योजनाहरू एक पूरै बर्षमा रहन्छ। कभरेज तपाईको कटौती योग्य पूरा गर्नु भन्दा पहिले कम्तिमा न्यून हुन्छ, त्यसैले प्राय जसो उनीहरूले आशा गरेनन् (वा कम्तिमा पनि चिन्ता छ) उनीहरूको लागि यस वर्ष ठूलो चिकित्सा खर्च हुनेछ। भनिएको छ, यो तपाईं को लागी बिमा छैन भन्दा राम्रो को लागी हुन सक्छ, यसैले हरेक विकल्प पूर्ण अन्वेषण गर्न नबिर्सनुहोस्।
म कसरी आपत्तिजनक स्वास्थ्य बीमाको लागि योग्य हुन?
धेरै वयस्कहरू आपत्तिजनक स्वास्थ्य बीमाको लागि योग्य हुन सक्छन्, तर तपाईंले केही सर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछ।
यदि तपाईं under० भन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने, र या त चाहनुहुन्न वा मेडिकेड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं विनाशकारी योजनाको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं 30० बर्ष भन्दा माथिसम्म हुनुहुन्छ भने, तपाईंले कठिनाई छुटको लागि योग्य हुनुपर्नेछ। यसको मतलव तपाईको नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिहरु छन् जुन तपाईलाई प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य योजना प्राप्त गर्नबाट रोक्दछ। यहाँ छन् बजार बाट १ scen परिदृश्य जुनमा तपाईलाई कठिनाइ छूटका लागि योग्य बनाउनुहुनेछः
बेदखली वा फोरक्लोजर
तपाईंको युटिलिटी कम्पनीबाट शट-अफ सूचना प्राप्त गर्दै
एक परिवारको सदस्यको मृत्यु
आगो, बाढी, वा अर्को प्रकोप जसले तपाईंको सम्पत्तीलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो
चिकित्सा खर्चबाट पर्याप्त debtण
खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि भयो किनकि तपाईं बिरामी, अशक्त, वा वृद्ध परिवार सदस्यको लागि हेरचाहकर्ता हुनुहुन्छ
एक कर एक निर्भरताको रूपमा बच्चा (जो मेडिकेड र CHIP कभरेजको लागि अयोग्य छ), र अर्को व्यक्ति बच्चालाई चिकित्सा सहयोग दिन अदालतको आदेश द्वारा आवश्यक छ
योग्य स्वास्थ्य योजना (QHP) मा बजार मार्फत नामांकनको लागि अपीलको निर्णयबाट योग्यता, तपाईंको मासिक प्रीमियममा कम लागत, वा समय अवधिको लागि लागत साझेदारी कटौती जब तपाईं बजार मार्फत QHP मा भर्ना हुनुहुन्न।
तपाईंको राज्य मेडिकेडको लागि योग्यता विस्तार गर्दिन, त्यसैले तपाईं अयोग्य हुनुहुन्छ
हजुरआमा व्यक्तिगत बीमा योजनाहरु को लागी छुट २०१ 2017 र पछिको लागि उपलब्ध छैन
अन्य कठिनाइ, यी कोटीहरूमा कैद गरिएको छैन
विनाशकारी स्वास्थ्य बीमाको औसत लागत कति हो?
समग्रमा, विनाशकारी स्वास्थ्य बीमा सामान्यतया जेबबाट अधिक महँगो हुन्छ तपाईले अन्य भुक्तानी गर्नु भन्दा पहिले नै प्रीमियम कम प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजनाहरु भन्दा कम हुन्छ। यहाँ विशिष्ट ब्रेकडाउन छ।
कटौतीयोग्य : यदि तपाईं बजार मार्फत विनाशकारी कभरेज पाउनुभयो भने, तपाईंको २०२० का लागि कटौतीयोग्य छ , ,,१50० । त्यो संख्या प्रत्येक वर्ष माथि जान्छ। यदि तपाईं निजी कभरेज खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने, संख्या $ 6,000 वा कम पनि जस्तो हुन सक्छ - निश्चित हुन तपाईंको व्यक्तिगत योजना जाँच गर्नुहोस्। निजी कभरेज घटाउनको औसत अहिले छ , ,,१88 ।
जेबको लागत : विनाशकारी योजनाहरूको लागि कटौती योग्य र बाहिरको पकेट लागत समान हो; एकचोटि भेट्नुहोस्, तपाईले दुबैलाई भेट्नुभयो।
प्रिमियमहरू : विनाशकारी स्वास्थ्य योजनाहरूको लागि, प्रीमियमहरू प्रत्येक महिना १०० डलर वा कम हुन सक्छ। तिनीहरू हाल औसत बारे मा $ १$०। यसलाई परम्परागत स्वास्थ्य योजनाहरूसँग तुलना गर्नुहोस्, जहाँ औसत मासिक प्रीमियम एक व्यक्तिको लागि मासिक। 400 र चारको परिवारको लागि monthly 600 मासिक हो।
कोपे : विनाशकारी स्वास्थ्य योजनाहरूको लागि योजनाहरू योजनाको रूपमा फरक फरक हुन्छन्, तर सामान्यतया तिनीहरू पारंपरिक स्वास्थ्य बीमासँग तिर्ने भन्दा बढी हुन्छन्।
कर अनुदान : आपत्तिजनक कभरेज बीमा कर अनुदानको लागि योजनाको लागत कम गर्न योग्य छैन।
विनाशकारी स्वास्थ्य बीमा राम्रो विकल्प हुन सक्छ यदि तपाईं युवा, स्वस्थ हुनुहुन्छ, र प्रमुख चिकित्सा योजनाको लागतको लागि भुक्तान गर्न चाहानुहुन्न भने। तर यदि तपाईं वृद्ध हुनुहुन्छ, धेरै मेडिकल हेरचाह आवश्यक छ, वा मात्र डाक्टरको धेरै जानुहोस्, यो उत्तम विकल्प नहुन सक्छ - र तपाईं योग्य पनि हुन सक्नुहुन्न। तपाइँको लागि उत्तम विकल्प के हो भनेर हेर्न अनुसन्धान गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
कति जनालाई हामीमा मधुमेह छ
र याद गर्नुहोस् कि आपत्तिजनक स्वास्थ्य बीमा कभरेजमा तपाइँका सल्लाहहरू समावेश नगर्न सक्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले उनीहरूलाई थप भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तपाईंको फार्मेसीमा कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नको लागि तपाईंको औषधोपचारको लागि singlecare.com मा खोज्नुहोस्।
के तपाइँ भ्याग्रा लिँदा रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ
के तपाइँ amoxicillin मा घाममा बस्न सक्नुहुन्छ?
मेरो रक्त शर्करा के हुनुपर्छ?
के फ्लू तनाव अब वरिपरि जाँदैछ